Author: Masho Galkis
Bilaysini Bir ka adag Talo laba adin dhexdood bay ka dhalataa 4. Amxaar la arag yaaba ferenji xaaji. Geel laba jir soo wada mar.
Caasigaa iridkaaga ma mooga, baarri dadow dad kuuma noqdo. Saddex waa laga maahmaabyo Talo aan tawfiiq lahayn Taws aan ka bogsi lahayn Tigaad aan biyo lahayn 4.
Nin daad qaaday xunbo cuskey Af waa kane, maxaa lagu aamaa Deriskaaskaa marna ku dayo marna ku diin. Ninkii seexdaa sixii dibi dhalay. Nin durbaan tuntay ilaaq dalbay. Dhagar qabe dhulkaa u dhaq-dhaqaaqa Faro ka ciyaar dabo ka ciyaar baa dhaanta.
Dameeraha ta ugu yar baa ugu biqlo badan. Saddex kaama hadho Nabsi kaama hadho Nasiib kaama hadho Nasab kaama hadho Nin wayni waa qorax casar joogta.
Nimaan dhididin ma dhergo Nimaan hubsiimo lahayni war gal maaha C Wax aad baratay waa baaskaa Kaadi badane waa loo gogol badiyaa Hangaraarac lug uma dhutiyo. Adhi shidho laga daayo. Mashaa alaah fikir wacan oo dhaxal somalii waaye. Biya sar tegey waa la sugayaa B Mid kaa toostay. Nin mar waashay waalida loogama sheekeeyo. Dheerow ii gaabow yaa jaree, dhuubow ma jaro.
Shan shidda ma macaysaa. Calafkaa, nin ku rabaa baa haya.
Dad waxa yaqaan nin tuugsaday iyo nin u taliyey. Fill in your details below or click an icon to log in: Magaalo qayrkaana u cay adiguna ha deynin. Dardaaran waa inta xayga la yahay. Naago waa belo loo baahan yahay.
Nin saddex buu nin u yahay Nin naagiisuu nin u yahay Ninna maalkiisu u nin yahay Ninna afkiisa u nin yahay Dhurwaabaa lagu yidhi fool xumadaa, markaasuu yidhi walaalkay weerana ma osmali. Doqoni meeshii la isku diriray uun bay ogeyd, meeshii lagu heshiiye sema oga. Caano Jiilaal canba canbid. Naago nin ay yaqaaniin col ma moodaan Intii orod jirey, kuftinna way jirtey.
Nin somaki ka maydh iyo dundumo ciid ka maydh labadaba waa lagu daalaa. Col iyo nabad mid baa caynka lagu xejiyaa. J Deeq lagu siiyo. Dhidar xabaalo qod bartay qudhin buu uga dhacaa.
Baruur qudhuntay baa baruuro qudhmisa.
Gabadhi waa meel xun joog. Rag jidiin baa walaaleeya. Aqoon xumo abaar ka daran qorsho xumo abaar ka daran Duqsi, caanuu ku dabaal bartaa fuudbuuse ku gubtaa Dameertu isku halayn bay hooyadeed dabada uga nuugtaa. Hunguri weyni kuunto weyni baa laga qaadaa Nin keligii garramay, iyo nin dhul gannay midna ma gefo.